3 ㎡ ~ 8 Design Naqshadaynta Qurxinta Musqusha, Noocyada Kala Duwan Ee Kolkaad Timaado
Bogga ugu weyn / blog / 3 ㎡ ~ 8 Design Naqshadaynta Qurxinta Musqusha, Noocyada Kala Duwan Ee Kolkaad Timaado
2021 / 04 / 07 Qoondayntablog 1157 0
Cinwaanada Musqusha Xiaoxin
Qurxinta musqusha, sida ugu macquulsan ee loo isticmaalo booska xaddidan ayaa ugu muhiimsan, musqusha ku jirta naqshadeynta qurxinta iyo qaabeynta oo ahmiyad gaar ah la siinayo, maanta waxaan haystaa soo koobid dhameystiran oo ah 3 ㎡ ~ 8 design naqshadeynta qurxinta musqusha.
3 ~ 4 ㎡ musqusha
Sideed u qaabeyn doontaa
Qiimaha sare ee hore
Sida haddii aad ku sii jirtid hawdka kuleylaha ah sida qaabeynta qaabka, xitaa qubeyska ayaa leh Zen. Ku rid biyaha diirran, saydhaa caleenta ubaxa, ma jiraan wax adduunka ka wanaagsan oo aan ku raaxeysan karno qubeyska.
Waxyaabihii hore waa laga tagay waa burbureen, laakiin isticmaalka wanaagsan ayaa ah wax lala yaabo oo lama filaan ah. Qalabka alwaaxa ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo celiyo quruxda rustic, nolosha yarna waxay noqon kartaa gabay.
Marka cagaarka ugu caafimaadka badani uu la kulmo musqusha, waxaan u maleynayaa inay farxad tahay inaan sii joogo dhowr ilbiriqsi si aan ugu ekaado muraayada horteeda. Naqshadeynta saqafka midabada midabada leh + muuqaalka daaqada kor ku xusan waa mid qaali ah oo aad u fiican.
Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u soo jeestay, u cadayo ilkahaaga oo subaxdii wejigaaga dhaq si aad uga weecato riyadii runta, waxaan rajeynayaa in midabkani kuu oggolaan doono inaad hurdada ka kacdo oo aad weli aragto quruxda riyada.
Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayaa u muuqda riyo ah inaad soo toosto, ilkaha caday oo wejigaaga dhaq subaxdii si aad uga weecato riyadii runta, waxaan rajeynayaa in midabada noocan ahi ay kuu oggolaan doonaan inaad hurdada ka kacdo oo aad weli aragto quruxda riyada .
Naqshadeynta Minimalist badanaa sidoo kale waa natiijo heer sare ah, naqshadeynta iyo iswaafajinta tabaha alwaaxa waxay siineysaa booska oo dhan bilicsanaanta casriga ah. Isla mar ahaantaana go'doomin karo meel gaar ah oo shaqeynaya.
Haddii cirka ay ka buuxaan xiddigo banaanka, dareenka sawirka daaqada daaqadu sidoo kale wuxuu noqon karaa mid taataabasho buuxda leh. Xaqiiqda dhabta ah ama ku darista daah ayaa kafiican, asturnaanta wali way ka muhiimsantahay bilicsanaanta.
Musqusha dhaqanka aqrinta musqusha, aakhirkii imisa qof ayaa ku dhaqmay? Xaqiiqdii, waqtiga la tagayo musqusha ayaa ah meesha ugu sarreysa ee dhiirrigelinta dad badan, sidaas darteed way wanaagsan tahay in la helo qolal buug-qoraaleed oo uumiga ka caaggan.
Qubeyska qubeyska ee 'Retro bathtub' waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay jacaylka dhalinyaro badan oo suugaaneed, sidaa darteed raaxeysiga qubayska xiisaha leh, sida haddii rinjiyeynta rinjiyeyaasha adduunka dunta, waxaa lagu qiyaasey inuu doonayo inuu halkaan seexdo.
5 ~ 6㎡Qolka Musqusha
Muraayadda muraayadda iyo golaha wasiirada
Cabbirka alaabta musqusha ma weyna, laakiin waxaa badanaa loo isticmaali karaa musqusha waxyaabo aan muhiim ahayn sida wejiga lagu dhaqo, koobka cadayga, mandiil si xariif ah ayaa loogu qariyaa muraayadda gadaashiisa, laakiin sidoo kale wareegga kale ee waxyar loo isticmaalo ee lagu dhaqo iyo alaabada nadiifinta oo si nadiif ah loogu soo ururiyo weelka ka hooseeya golaha wasiirada. Si wada jir ah ula naqshadeynta muraayada guud, waxaa loo kala bixin karaa iyadoo la dareemayo isku dhufasho ballaaran.
Fudud oo tayo sare leh oo dusiyo gudaha ah
Darbiga musqusha yar iyo qurxinta dabaqa uma baahna in si aad ah loo sharraxo, dusiyo heer sare ah oo la soo dhoofiyo ayaa kharash badan ku baxa, mana fududa in wax xoog leh lagu soo saaro meel yar, waxaa fiican in la isticmaalo tobanaan doollar oo mitir laba jibbaaran oo doolshaha gudaha ah.
Meel yar oo ka mid ah musqusha kala qaybsan
Musqusha ugu badan ee suuqa ku taal ayaa loo qaybiyaa guud ahaan oo loo qaybiyaa laba. Musqusha guud ahaan maxaa yeelay taangiga iyo musqusha waa wax isbadal sameeya, sicirka duugga ayaa aad u sarreeya, qiimaha ayaa ka qaalisan qaabka musqusha loo kala qeybiyay, wuxuu gaarayaa aag aad u weyn. Marka meel yar oo la doorto musqusha kala qaybsan labadaba meel dhig oo lacag badbaadi. Dheer laakiin 70 sintimitir oo ah “dhuuban” murugsan kursiga musqusha si ay u noqoto doorashada ugu habboon ee musqusha yar.
Weelka lagu dhaqo ayaa diida weelka tiirarka ah
Musqusha yar isku day inaadan ku rakibin weel tiirar ah, maxaa yeelay tiirka safka hoose si dhib yar ayaa loo isticmaali karaa, ilaa lagu duuddubo khaanad musqusha oo si gaar ah loo habeeyay, labada qarash ee la isku daray ayaa ka fiicnaan laheyd inaad iibsato baaxad cidhiidhi ah oo saxanka miiska, lacag ka dibna iibso mug ka mid ah golaha wasakhda waaweyn ee qarsoon. Ku dar qaar ka mid ah armaajooyinka yar yar ama qaansooyinka si aad u keydiso qaddiyadaha iyo dhammaadka, oo lagu daro suxuunta saabuunta iyo baararka shukumaanada iyo agabyada kale, lacag badan iyo dayactirka musqusha ee keydka ah waa guul weyn
Eeg barkadda qubeyska ee qoto dheer laakiin aan ballaadhnayn
Dhererka barkadda qubeyska oo ka hooseysa 1.5 mitir, qoto dheerku inta badan way ka qoto dheer tahay qolka qubeyska guud, qiyaastii 70 cm. Qubeyska qubeyska ayaa ka fudud istaagga barkadda guud, mana saameyn doonto raaxada isticmaalka sinnaba. Musqulaha yar yar waa inay doortaan saxan yar oo qoto dheer.
Musqusha ka sareysa golaha wasiirada
Dusha sare ee musqusha waxaa ku yaal qurxinta musqusha caadiga ah ee "vacuum zone", xaqiiqdii, haddii ay dhacdo inaanu saameyn musqusha, waxaan u isticmaali karnaa meeshan si aan u sameyno kabadh sudhan, kabadhka waxaa lagu dhejin karaa warqadda musqusha, tuwaallada gacanta, saabuun, iwm.
Basin rakibaadda sheyga sare
Ha ahaato dusha weelka ama qolka musqusha miiska dushiisa, dhig saad badan oo nadaafad iyo fayadhowr ah ayaa u muuqan doona mid cakiran, oo sahal ah in la taabto, sidaa darteed waxaa habboon in lagu qodbo qaybta kore ee weelka derbiga dhererkiisa 10 cm shelf, ilaa iyo inta la hoos gelin karo dhalada qurxinta, burushka, koobabka dhaq, iwm. Dhererka shelf si aan loo hor istaagin isticmaalka qasabadaha waa ku habboon tahay, maaddada waxaa lagu dooran karaa alwaax, galaas, iwm.
7 ~ 8㎡Qolka Musqusha
Midab madow iyo mid fudud ayaa musqusha ka dhigi doonta mid aad u ifaysa.
Midabka alwaaxa asalka ah sidoo kale waa wax aad u fiican.
Muraayaddu maahan inay ahaato mid laba jibbaaran, doorta muraayada wareega sidoo kale waa mid shaqsiyan shaqsiyan Oh.
Waxaad dooran kartaa xoogaa yar oo dusha sare ee dabaqa ah, oo aad ugu muuqda dhulka.
Foornada cad ee saafiga ahi aad ayey u adag tahay, kaalay safka dhexda.
Darbiga buluugga ah, sida inuu ku dhex jiro badda dhexdeeda, barkadda qubeyska ayaa ku farxi doonta qubayska.
Marwalba waxaan dareemaa in musqusha ay tahay inay lahaato midab buluug ah si ay sifiican ugu ekaato.
Hadday tahay buluug mugdi ah ama buluug khafiif ah, ama noocyo kala duwan oo buluug ah, waxaa jiri doona dareenka badda.
Labadan nooc ee buluuga ah iyaguna way fiican yihiin.
Haddii aad u maleyneyso inay tahay mid kali ah, waxaad sidoo kale sameyn kartaa derbi sawir ah musqusha, waa hagaag, laakiin waa inaad hubisaa in gurigaagu leeyahay qol lagu qubeysto, haddii kale farxad ma noqon doonto daadinta biyaha.
Qurxinta guridda ayaa sidoo kale xiiso leh.
Kala saar aagga lagu maydho aagga intiisa kale, waxaa fiican in la nadiifiyo.
Ku sudhan rinjiyeynta musqusha sidoo kale waa xulasho wanaagsan.
Haddii aad rabto inaad gurigaaga ka dhigto mid aad u firfircoon, ciyaarta noocaas ah ee lebenku aad u fiican ma fiicna?
Ugu dambeyntii waxaa la helay kiis casaan ah, gabadha qalbigeeda ma seegto.
Midabada midabada leh ee midabada leh, oo leh ciyaar wanaagsan, gabi ahaanba waa cabsi badan.
Sidoo kale midabbo aad u muuqda oo midab leh, casaan leh oo cagaar ah ayaa soo baxaya.
In darbiyada musqusha la armaajo qaar ka mid ah, sidoo kale waa doorasho fiican.
Midabada firfircoon waxay ka dhigayaan guriga oo dhan mid muuqda.
Hore:: Weelka lagu dhaqo banaanka ayaa runtii waxtar leh! Laakiin Hadaadan Fiiro Gaarin 5-taan Qodob, Dhibaato Joogto ah oo Dambe! Next: 51 Qarsoodiga Naqshadaynta Musqusha, Markaa Waxaad Qaadaysaa Qubeys Kulul Oo Diiran Xilliga Jiilaalka!
Musqusha Dadyowga Kale Maxay Markasta Ugu Fiicanyihiin?
Hal Musqul Ayaa Ku Filan, Maxaad Ugu Baahan Tahay Laba Musqulood Dalka Shiinaha?
Musqusha Guriga, Musqusha Darbiga Musqusha? Ama Toi Dheecaanka Dhulka ...